Saturday, 04.04.2020, 01:24pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 04.24.2018, 01:20pm
Thursday, 04.12.2018, 11:25am
Tuesday, 04.03.2018, 01:45pm
इशाईकरणको अर्को अध्याय ‘गाई काण्ड’
Tuesday, 03.27.2018, 12:18pm
युरोपेली यूनियनका पर्यवेक्षकको प्रतिवेदन आए लगत्तै गाई काट्ने कानुन बनाउने घोषणा गरेपछि यसको चर्को बिरोध भएको छ । गाई काट्ने कानुन बनाएर बजारमा खसी–कुखुरा काटेजस्तै गर्ने हो भने यो देशको अवस्था के होला ? गाईलाई देवताका रूपमा पूजा गर्नेहरूले त्यसलाई कसरी स्वीकार्लान् । विगतमा युरोपेली यूनियनको पैसामा जातीय आन्दोलन चर्केको कुरा कतिपय जातीय अगुवाहरूले नै स्वीकार गरेर अलग भए । आफूलाई नागरिक अगुवा ठान्नेहरूले पनि हात झिके ।
हवाई जहाज विज्ञानको विकास हो कि वैदिक शास्त्रको ? यो विवादका विषय हुनसक्ला, अध्यात्मवादीहरूले विमान त हिन्दु शास्त्रमै उल्लेख भएको थियो भन्ने दावी गर्ने हो भने पूर्वी जगतले किन विमान बनाएन ? अनि हैन भन्ने हो भने रामायणमा विमानको सन्दर्भ कसरी जोडियो ? हजारौं वर्षअघि लेखिएको रामायणमा ‘पुष्पकविमान’को चर्चा छ । श्रीरामले लंकाा विजय गरेपछि रावणको पुष्पकविमान चढेर अयोध्य पुगेको चर्चा छ ।
स्रोत नभएर हैन सोच नभएर गरीब
Tuesday, 03.06.2018, 02:42pm
नेपाल गरीब हो कि गरीब बनाइएको हो ? नेपाल सम्पन्न हुनसक्ने मुलुक हो कि हैन ? यो प्रश्न यो पुस्ताले हजुरबा पुस्तादेखिका राजनीतिक नेताहरुलाई सोध्ने गर्दछन् । चार दशकअघि नेपाल धानचामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो । विकासक्षेत्रपिच्छे राइस मिल खुलेका थिए । अहिले नेपाल चामलम आयात गर्ने र अनुदानमा खाने मुलुक बनेको छ । एसियामी जलविद्युत उत्पादन गर्ने अग्रणी मुलुक हो तर एक शताब्दी पूरा भैसक्दा एक हजार मेघावाट पनि विद्युत उत्पादन छैन । भारतबाट आयात गरेर भारवहन गरिएको छ । भएका उद्योगधन्दा निजीकरण र उदारीकरणको नाममा बेचिए, भारतको एकलौटी बजार बन्यो । व्यापार घाटा चौपट छ युवा निर्यात गरेर बस्तु आयात भैरहेको छ ।
Tuesday, 02.20.2018, 10:59am
सरकारले चाहे के हुँदैन होला ? दुईजना कलाकारको चाहनाले अहिलेसम्म चारवटा एकीकृत नमूना बस्ती बनिसक्यो भने सरकारले चाहे नहुने कुरै थिएन । जुन काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपथ्र्यो त्यो काम मनकारी कलाकारले गरे । सरकारहरु लाजै पचाएर प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको छ । सुदूरपूर्वी नेपालबाट १७ सय रुपैयाँ बोकेर राजधानी छिरेका हाँस्य कलाकार दम्पत्ति सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)लाई उनीहरुको कर्मले आज विश्वभर कलाकारकासाथै देशकै सर्वश्रेष्ठ समाजेवीका रुपमा चर्चित बनाएको छ ।
स्वच्छ वातावरण र यज्ञको सम्बन्ध
Thursday, 01.25.2018, 12:35pm
हामी प्रत्येकले घरमा कुनै शुभकार्य गर्दा हवन गर्नेगर्दछौं । जानेर–बुझेर वा परम्परा निर्वाहकै लागि भए पनि यसरी गरिएको हवन (यज्ञ)ले वातावरणलाई कति लाभ पु¥याउँछ भन्ने हामीमध्ये थोरैलाई मात्र थाहा छ । वैदिक संस्कृतिमा यज्ञ उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसको एउटै कारण हो सृष्टि संरचनाका यावत जीव, वनस्पतिको रक्षा । कारण उनीहरुका लागि चाहिने शुद्ध हावापानी र खाद्यान्न । त्यसकारण भन्न सकिन्छ यज्ञ गर्नु फगत आगोमा अन्न हु¥याउनु मात्र हैन । यो वातावरण सुद्ध गर्ने सबभन्दा वैज्ञानिक वैदिक विधि हो । यज्ञमा होमिने चरुबाट निस्कने धुँवा नै वातावरण शुद्ध राख्ने सबभन्दा उपयुक्त पदार्थ हो ।
बल्ल खुल्यो बुद्धिको बिर्को
Tuesday, 01.09.2018, 01:20pm
पर्सी पुस २७ गते २९६ आंै जन्मजयन्ती । झण्डै एक दशकपछि सरकारले बिदा दियो । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा । एक दशक अघिसम्म पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा राष्ट्रिय रूपमा मनाइन्थ्यो । २०६२।०६३ को परिवर्तनपछि राजा–महाराजाहरूले राष्ट्रका लागि दिएको योगदानको चर्चा गर्नुसमेत लाजको विषय बन्न पुगेको थियो । पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र जस्ता देशभक्त राजाहरूको राष्ट्रिय स्तरमा चर्चै गर्न नहुने अवस्थामा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ ।
धुलो हटाउन पानी, चिप्लिएर दुर्घटना
Tuesday, 01.02.2018, 01:48pm
काठमाडौं उपत्यकाका धेरै सडक अहिले पनि धुलो र हिलो छ । कारण मेलम्चीको पाइप विस्तार र सडक विस्तार । अहिले कतिपउ सडकमा धुलो हटाउन हालिएको पानीले हिलाम्ये हुने गरेको मात्र हैन चिप्लिएर दुर्घटना नै हुन थालेका छन् । यात्रुहरु सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन । स्थानीय निकाय गठन भएपछि अहिले ठाउँठाउँमा दिनको ३–४ पटक पानी हाल्ने गरिन्छ । यसले धुलो त हट्छ तर दुर्घटना बढ्न थालेको छ ।
Tuesday, 12.19.2017, 01:18pm
निर्वाचनको साथर्कता तब हुन्छ...
Tuesday, 12.12.2017, 02:49pm
निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्ड हो । जनताको मतद्वारा निर्वाचितहरु नै जनप्रतिनिधि हुन् र उनीहरुको दायित्व जनताका हरेक सुख दुखमा साथ दिनु हुनेछ । विगत लामो समयदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचन फगत नेतालाई सत्ता शिखरमा पु¥याउने र उनीहरुको समृद्धिको सोपान खडा गर्ने मेरो मात्रै बनिरहेको दर्दान्त अवस्था छ ।
Tuesday, 12.05.2017, 03:49pm
दश वर्षमा मुलुकको परिवर्तनको यथार्थ
Tuesday, 11.28.2017, 11:21am
दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको ढोका खोलेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भएको छ । यो दश वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेक विकृति, विसंगति देखापरे । अधिकारका नाममा लाग्नै नहुने नारा लागे, धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुतामा विष घोल्ने काम पनि भए । अहिले शान्ति प्रक्रिया लगभग टुंगिएको देखिए पनि यसका अवशेषहरु अझै बाँकी छन् । वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी अझै हुन सकेको छैन भने पीडितले क्षतिपूर्ति र न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
जो घरभित्रै असुरक्षित छन्...
भनिन्छ हरेक व्यक्तिका लागि घर, परिवार सबभन्दा सुरक्षित स्थल र व्यक्ति हुन् , तर, आजभोलि घरभित्रै महिला असुरक्षितन छन् । मूलतः महिला, बालिका तथा युवतीहरु घरभित्रै यौन हिंसाको शिकार भैरहेका छन् । चाहे यौन हिंसा होस् या अरु हिंसा, महिला घरभित्रै हिंसाको शिकार भैरहेकी हुन्छिन् । कति बाहिर आउँछ, कति आउँदैन ।
Wednesday, 11.15.2017, 02:14pm
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च आधा खर्बभन्दा बढी हुन्छ । आयोगले निर्वाचन सामग्री, प्रचार प्रसासर मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाई, शान्ति सुरक्षा तथा भत्ता लगायतमा २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्दछ । यसअघि आयोगले रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ ।
Tuesday, 11.07.2017, 11:04am
Wednesday, 10.11.2017, 01:53pm
देश दशैंको रमझममा झुमिरहेका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता सहमतिले धेरैलाई चकित तुल्याएको छ । धेरैको सातो उडेको छ । भनिन्छ यो सहमतिले दक्षिणी छिमेकी मुलुकलाई समेत झस्काएको छ । दलभित्रको गुटबन्दी, दल–दलबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केवल व्यक्तिगत अनि दलीय स्वार्थका कारणले मात्रै उनीहरु राजनीतिको चलिरहेका बेला आम जनतामा भने निराशा र कुण्ठा मात्रै बढ्दो छ । पार्टीहरुले जनता भनेका आफ्ना कार्यकर्ता मात्र हुन् भन्ने ठानेर व्यवहार गर्दा निरपेक्ष जनता चेपुवामा गर्दै गएका छन् ।
» कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त
» प्रथालाई कानुन बनाउन मिल्छ ?
» प्रकृतिसंग निकट रहने नै प्रकोपको मारमा
» विपत्तिलाई राजनीतिक रङ्ग नदिउँ
» ‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ?
» सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन्
» दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना
» निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ?
» हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले...
» राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा
» दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश
» स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान
» अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा
» नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर
» स्थानीय तह निर्वाचन, युवाहरूको चासो र सन्देश
» खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता
» खै त्यो बेलाको कूटनीतिक सामथ्र्य
» शैक्षिक मुद्दा र स्ववियू निर्वाचन
» माओवादी जनयुद्धका क्रान्ति कि भ्रान्ति ?
» यही हो शहीदको सम्मान ?